Dowladda oo qalabka ka hortagga COVID19 ku wareejisay Maamulada Banaadir,K/galbeed & Jubbaland – Al-Hurriyah
Wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa maanta ku wareejisay qalab loogu talo galay ka hortaga Cudurka COVID19 Maamulka Gobolka Banaadir iyo maamaul Goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, kaasi ah qalabka ayuu Dawladda Soomaaliya ugu deeqay Maalqabeenka reer Shiine ee Jack Ma Foundation.
Dowladdu waxay sidoo kale Maalinta berri ah ay qalab kuwaan la mid ah ku wareejin doontaa Maamul Goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle.
Arrintaan ayaa ka dambeysay ka dib markii ay Wasiirada Caafimaadka dowladda dhexe , kuwa maamul goboleedka iyo maamulka gobolka banaadir ay magaalada muqdisho ku yeesheen kulan looga hadlayay sidii wadajir looga hartagi lahaa caabuqaan saameynta xooggan ku yeeshay Caalamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay.
Dowladda Soomaaliya oo hakisay duullimaadyada gudaha ah
DegDeg Dowladda Soomaaliya Oo Xaqiijisay In Kiiskii Ugu Horeyay Ee Coronavirus Ah Laga Helay Dalka
Dowladda federaalka somaaliya ayaa xaqiijisay in kiis kii ugu horeeyay ee Coronavirus ah laga…
Madaxweynaha dowlad gobaleedka jubbaland Axmed Maxmed Islaam Axmed Madoobe ayaa dowlada fadaraalka ku…
Bangiga Dhexe Ee Somaaliya Oo Amar ku bixiyay in la xiro Accounada (Forex Trading)
Qoraal ka soo baxay bangiga dhexe ee Soomalaiya ayaa lagu amray bangiyada ganacsiga dalka iney xiraan…
Wasiirka Wasaarada Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta sare ee XFS Cabdullahi Goodax Barre iyo…
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish)…
Maamulka Gobalka Hiiraan Oo Ka Hadlay Mashariic lagu Hormarinyo Baladweyne
Maamulka gobalka Hiiraan ayaa ka hadley wafuud ka kala socotey wasaaradaha howlaha guud iyo qorsheynta…
Warar Dheraad Baled-weyne Doon ay saarnaayeen Mas’uuliyiin katirsan Dowlad goboleedka Hir-Shabeelle iyo Xubnaha Guddiga gurmadka fatahaadaha. Ayaa Degtay xili ay isaga kala goosheysay xafadaha magalada baledweyne oo fatahaad uu wabiga shabelle sameyey weyn ku…
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa daah-furay ololaha wacyigalinta ka hortaga cudurka Caabuqa ah ee Covid-19 oo dhibaata adag ku haaya nolasha iyo horumarka caalamka. Aqalka Dowlada…
AL-Shabaab Oo Toogasho Ka Fuliyay Shabeellada Hoose
Xarakada Al-Shabaab ayaa sacadihii la soo dhaafay xukun dil ah ku fulaliyay afar qof oo ay shegeen in ay ka tirsanaayeen dowladda fadaraalka ee somaaliya Maxakamad hoostagta Al-shabaab ayaa sheegatay in raggani ay qirteen dambiyadii lagau soo eedeyay,islamarkaana…
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax ka dhacay degmada kaaraan ee Gobalka Banaadir . Qaraxan oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa lala damacsanaa gaari cabdi bile ah waxaa uuna ka dhacay wadada jamuhuuriya ee degmada kaaraan . Dad ka ag dhawaa goobta qaraxa…